Maamulka Somaliland oo Ictiraaf Weeydiisatay Yuhuuda |
Maamulka Somaliland oo Ictiraaf Weeydiisatay Yuhuuda
Wargeyska ugu weyn looguna akhris badanyahay dalka Israel ee Jeresulem Post ayaa boggooda hore shalay waxay ku qoreen dhambaal uu ku daabacay qoraa u dhashay Somaliland oo saldhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia oo la yidhaahdo “C/raxmaan Maxamed Diiriye Diiriye”.
Qoraalka waxaa far waaweyn uu wergeysku ciwaan uga dhigay “Somaliland iyo Israel” dabadeedna qoraaga Axmed Diiriye ayaa wuxuu ku bilaabay “Ilaa maalintaan dhashay waxay dhegahaygu maqlayeen necayb iyo karaahiyo loo qabo Israel iyo dadka yuhuudda ah, necaybkaasi oo dadka Soomaaliyeed aanay u haynin sabab la qeexi karo oo aan ka ahayn colaadda dhex taala Israel iyo Carabta oo aan ahayn mid khusaysa dadka soomaaliyeed” ayuu qoraagu ku yidhi dhambaalkiisa.
Qoraagu isagoo sii wada qoraalkiisa wuxuu yidhi “Waagii uu keligii taliyahii Siyaad Barre ka arriminaayey Soomaaliya 1969-kii ilaa 1991-kii waxaa Soomaaliya ka jiray barnaamijyo dadka lagu carabaynaayey oo Soomaalida lagaga dhigaayey qoomiyad Carbeed iyadoo xaqiiqdu tahay inaanay Soomaalidu ahayn dad Carab ah.
Qoraagu wuxuu sheegay in dadka reer Somaliland ay aad u danaynayaan xidhiidh sokeeye oo walaalnimo ay la yeeshaan dalka Israel sida ay Israel xidhiidho dhow ula leedahay qaar ka mid ah dalal muslim ah.
Halkaan hoose ka daawo hees laga sameeyay codsiga uu maamulka Somaliland u gudbiyay dalka Israaiil
Haddaba markii albaabadii citiraafka ee Europe, USA, dowladaha Carabta, kuwa Midowga Africa iyo dowladaha IGAD ee dariska ka soo wada xirmeen maamulka Somaliland, ayaa SHOCK ku dhacay shacbiga Somaliland, dowlada Siilanyo iyo aqoonyahandiiba. Waxay naf la caarinimo dan moodeen inay isku maqiiqaan oo naxriis ka radiyaan Isreal iyagoo ku beer laxwsanaya cayda umaddaha Carbeed ee aynu walaalaha nahay.
Maaha markii ugu horeysay ay dadka ku abtirsada maamulka Somaliland ay u gacan haatiyaan Isreal si ay citaraaf u helaan, waxaana jira dad siyaasiyiin waaweyn oo magac ku leh maamulkaas oo aanan rabin inaan halkaan ku magacawno sababo qaarkood jira awgood inay hadda ka hor ay codsiyo citiraaf ah ka dalbadeen dowladda Isreal.
Maamulka Somaliland ayaa had iyo jeer geed dheer iyo mid gaaban u koraan sidii ay u kala dhantaali lahaayeen midnimada soomaliyeed.
Arrintaan ayaa ku soo beegmayso markii Dowladda Turkiga ay dhowaan sheegtay inaysan marnaba raali ka noqoneynin islamarkaana aysan taageereynin kala qaybsanaanta Soomaaliya.
Xigasho shabakada http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Somaliland-and-Israel